Nebraska Medical Marijuana - Nebraska Cannabis Mitemo neMirau
Nebraska Mitemo yeCannabis
Nebraska Chiremba Marijuana | Nebraska Mitemo yeCannabis
Nebraska mbanje yekurapa inogona kuzadzikiswa muna 2020. Nebraskans ichavhota pachirongwa chekurapa mbanje munaNovember. Seth Morris kubva Berry Mutemo yakabatana kutiudza isu zvese zvatichada kuziva nezveNebraska inogona kuita MMJ musika.
Teerera kune yedu PodCast Cannabis Pamutemo Nhau kana Tarisa iyo YouTube inotumidzwa Nebraska Chiremba Marijuana | Nebraska Cannabis Mitemo neNebraska Cannabis Gweta Seth Morris yeruzivo inoenderana.
RELATED POST: South Dakota Marijuana Mitemo
RELATED POST: Pennsylvania Adult-Shandisa Cannabis Mirairo
Unofarira kupinda muindasitiri ye cannabis?
Chiremba Marijuana muNebraska
Nebraska yave pedyo nekunyoresa mbanje yekurapa mushure kuungana vangangoita 182,000 masiginecha echirongwa chekukumbira chikumbiro, makumi matanhatu ezviuru zvemasaini kupfuura zvaidikanwa, kuisa chirongwa ichi pamusoro Vhoti yaNovember.
Mushandirapamwe uyu unotungamirwa na Nebraskans yeMarijuana yekurapa unenge uchiwedzera Chinyorwa XIX kune iyo Nebraska Bumbiro kubvumira vanhu vakuru, pamwe nekurudziro yechiremba ane marezinesi kana mukoti, kushandisa, kutora, kutenga, uye kugadzira mbanje kudzikisira chirwere chakakomba.
Izvo zvaizo, zvakare, kubvumidza vana, vari pasi pemakore gumi nemasere ekuberekwa, pamwe nekurudziro yechiremba ane marezinesi kana mukoti uye mvumo yemubereki kana muchengeti wezvemitemo anoona nezvesarudzo yavo yehutano, kushandisa mbanje kudzikisira chirwere chakakomba. Vabereki vevana vanoshandisa mbanje yekurapa vanobvumidzwa kutora, kutenga, uye kuburitsa mbanje kudzikisira mamiriro ekurapwa kwevana vavo.
Chiyero chekuvhota chaizopa mvumo kuHurumende Legislature yeNebraska kuraira mirau yekutonga chirongwa chehurumende chekurapa-mbanje.
Iyo Kugadziridzwa Kunyoresa Zvekurapa Marijuana muNebraska
Tsanangudzo yecannabis: Iko kuchinjiswa kunotsanangura cannabis, nekuda kwezvibvumirano izvi, se:
“Zvikamu zvese zvemuti wejenabis, ingave ichikura kana kuti kwete, mhodzi dzayo, nebwe rakaburitswa kubva muchikamu chipi zvacho chemuti, nemubatanidzwa wese, kugadzira, munyu, chinobva, musanganiswa, kana kugadzirwa kwemuti wakadai, mbeu dzayo , kana kuti nebwe racho ”
“Chikamu chino hachidziviriri marezenisi ekukurumidza uye mutemo unonzwisisika we [varimi, vagadziri, nezvimwewo]. Mutemo wakadai uye marezinesi hazvipe mutoro usingaenzanisike pakukwanisa kwevanhu vanobvumidzwa kushandisa mbanje sezvakapihwa muchikamu chino kuwana mhando uye huwandu hwecannabis, zvigadzirwa zvecannabis, nemidziyo ine chekuita necannabis yavanoda. ”
Mitero pamubanje wekurapa: Kugadziriswa uku hakuise mutero wembanje yekurapa mudunhu reNebraska
Kushandiswa kwembanje yekurapa: Iyo danho haritenderi kudyiwa neruzhinji, uye zvakare haibvumidze kutyaira zvisina kufanira pasi pesimba rezvekurapa cannabis.
Ikozvino Marijuana mutemo muNebraska
Aya ndiwo mamiriro ezvinhu muCornHusker nyika, sekureva kwe Marijuana Policy Project:
“Pfuma iyi pari zvino haisi pamutemo muNebraska. Kubata one ounce kana kushoma ndiko kukanganisa, uko kunorangwa nemubhadharo wepamusoro we $ 300, uye mutongi anogona kuraira mutadzi kuti apedze kosi yekudzidzisa zvinodhaka. Kutongwa kwechipiri kwekubata imwe ounce kana zvishoma chikanganiso chinorangwa nemubhadharo wakakura kwazvo wemadhora mazana mashanu, uye chechitatu uye chinotevera kutongwa kwekubata one ounce kana kushoma imhosva uye vanorangwa nemutongo wakakura wemazuva manomwe kujeri uye faindi yepamusoro ye $ 500. Kurima hakubvumirwe. Zvirango zvekurima muNebraska zvinoenderana nehuremu hwese hwenzvimbo dzinowanikwa. ”
Kupikiswa kuchinjiso kune kunyoreswa pamutemo kwembanje yekurapa muNebraska
Kunyangwe nerutsigiro rukuru iyi danho rekutanga rave naro kubva kune vese masiginecha, yanga isiri mutorwa kushoropodzwa. Mushure mekutarisana nematambudziko mazhinji pamusoro pekurangarirwa kwemasaini nekuda kwechirwere, chave kuratidzwa, chave chinangwa chekudzosera kumashure kubva kune akawanda manhamba.
Kwete chete zvaakaita Gov. Pete Ricketts vanotaura vachipesana neiyo danho rekutanga mumusangano nevatori venhau muLincoln, achiti “Hakuna chinhu chinonzi mbanje yekurapa. Ichi hachisi chinhu chinganyorerwe nachiremba. Haisi kuzogoverwa kuburikidza neyefesi. Aya ndiwo marapirwo angave munharaunda menyu. ”
Kupokana kuvhoti kwakaiswawo mudare, vachipokana kuti rugwaro rwakarongwa rwakatyora mitemo yenyika yaida matanho ekuvhotesa kutarisa pamubvunzo mumwe chete. Kuchengetedza kuti chiyero ichi chinomutsa mibvunzo miviri yakasiyana: kuti vagari vanofanira here kuva nekodzero yekushandisa mbanje kuchipatara, uye kuti makambani akazvimirira anofanirwa kubvumidzwa kurima nekutengesa.
Zvisinei nezvinangwa izvi zvekumisa kuvhota kwechiyero munaNovember, vatsigiri vepamutemo vane chivimbo chekuti danho richapona danho redare uye richapasa gwaro raNovember.
Full chinyorwa yeChirongwa cheBumbiro remutemo chekumisikidza mbanje yekurapa muNebraska
Kuwedzera chikamu chitsva 1 kuchinyorwa chitsva XIX:
XIX-1 (1) Mumwe munhu ane makore gumi nemasere ekuberekwa kana kupfuura, kana akakurudzirwa nachiremba ane marezinesi kana mukoti, ane kodzero yekushandisa, kutora, kuwana, kutenga, uye zvakachengeteka uye zvine hungwaru kugadzira huwandu hwakakwana hwecannabis, zvigadzirwa zvecannabis, nemidziyo ine chekuita nekannabis kudzikisira chirwere chakakomba. Munhu akadaro anogona kubatsirwa nemuchengeti mukushandisa kodzero idzi.
(2) Munhu ari pasi pemakore gumi nemasere ekuberekwa, kana akakurudzirwa nachiremba ane marezinesi kana mukoti uye nemvumo yemubereki kana muchengeti wezvemitemo aine chekuita nezvehutano sarudzo dzemunhu akadaro, ane kodzero yekushandisa cannabis, cannabis zvigadzirwa, nemidziyo inoenderana nekannabis kudzikisira chirwere chakakomba. Munhu akadaro anogona kubatsirwa nemubereki, muchengeti wepamutemo, kana muchengeti, uyo anogona kuva, kuwana, kutenga, uye zvakachengeteka uye zvine hungwaru kuburitsa yakaringana svutugadzike, zvigadzirwa zvecannabis, uye zvishandiso zvine chekuita necannabis zvakamirira munhu wacho.
(3) Kodzero dzakachengetedzwa muzvikamu (1) uye (2) zvechikamu chino dzinosanganisira kodzero yekuwana kana kutenga mbanje, zvigadzirwa zvecannabis, nemidziyo ine chekuita necannabis kubva kumasangano akazvimirira. Masangano akazvimirira uye vamiririri vanoshandira vamiririri venyika muHurumende yeNebraska vanogona kukura, kurima, kuita, kutora, kutakura, kutengesa, kuyedza, kana kuendesa zvinhu zvecannabis, zvigadzirwa zvecannabis, nemidziyo ine chekuita nekannabis yekutengesa kana kuendesa kune munhu anotenderwa kushandisa cannabis pasi pechikamu (1) kana (2) chechikamu chino.
(4) Vanhu kana masangano anoita zviito zvinobvumidzwa, kana kushandisa kodzero dzakachengetedzwa nechikamu ichi haazo sungwa, kupomedzerwa mhosva, kana kurangwa kwevanhu kana mhosva pamberi pemutemo wenyika kana wemunharaunda, kunze kwekunge zvirango zvinonzwisisika zvinogona kupihwa kutyora mitemo inonzwisisika, mirau, nemirau yakatemwa zvichiteerana nechikamu (5) chechikamu chino.
. kuve nechokwadi chekuenderera mberi kwekuwana kwevanhu vakadaro kune iyo mhando uye huwandu hwecannabis, zvigadzirwa zvecannabis, nemidziyo inoenderana necannabis yavanoda; uye kudzivirira kutendeuka zvisiri pamutemo kwecannabis. Mitemo yakadai, mirau, kana mirau haifanire kupa mutoro usakafanira pakushandisa kodzero dzakachengetedzwa nechikamu chino.
(b) Chikamu ichi hachizodziviriri marezinesi ekukurumidza uye mutemo unonzwisisika wemasangano nevamiririri vanoshanda pasi pechikamu (3) chechikamu chino Mutemo nekupa marezinesi hazvizoregi mutoro usingaenzanisike pakukwanisa kwevanhu vanobvumidzwa kushandisa cannabis sezvakapihwa pano. chikamu chekuwana mhando uye huwandu hwecannabis, zvigadzirwa zve cannabis, uye zvishandiso zvine chekuita necannabis zvavanoda.
(6) Chikamu ichi hachifaniridzirwe ku: (a) Bvumira kuputa mbanje paruzhinji; (b) Inoda kuvharirwa kana kugadziriswalities kubvumira kubata kana kushandiswa kwecannaban munzvimbo dzakadai; (c) Bvumidza kushanda kwemotokari uchinge wakanganiswa necannabis; kana (d) Zvikasadaro tendera kuita hunhu hunenge hwakaregeredza kuita uchinge wakanganiswa necannabis.
(7) Chikamu ichi hachidi kuti mushandirwi abvumidze mushandi kuti ashande asina hutauri hwecannabis.
(8) Chikamu ichi hachidi kuti chero inishuwarenzi ipe inishuwarenzi yekushandiswa kwecannabis.
(9) Nezvinangwa zvechikamu chino, cannabis zvinoreva zvikamu zvese zvemuti wejenabis, ingave ichikura kana kuti kwete, mhodzi dzayo, nebwe rakaburitswa kubva muchikamu chipi zvacho chemuti, nemubatanidzwa wese, kugadzira, munyu, zvicherwa, musanganiswa, kana kugadzirirwa kwechirimwa chakadaro, mhodzi dzacho, kana resini yacho.
Kana chiyero ichi chikapfuura Nebraska yaizobatana Oklahoma, Missouri, uye Utah mune runyorwa rwematunhu akabvumidza yavo yekurapa mbanje zvirongwa nevavhoti gore rino
Verenga iyo Nebraska Medical Marijuana Bumbiro Remutemo